रेडमन्ड RMC-FM230 - जो नयाँ सम्भावनाहरू खोल्छ नवीनतम multivarka छ। एक बढ्दो हीटर मा अभिनव बर्नर रूपमा प्रयोग अनुमति दिनुभएको छ।
रेडमन्ड RMC-FM230: प्रौद्योगिकी विशेषताहरु को सिंहावलोकन
यसलाई केही Multivarki कुनै आश्चर्य रूपमा आएका छन् सक्नुहुन्छ कि जस्तो थियो। तैपनि, रेडमन्ड RMC-FM230 उपकरण विपरीत प्रमाणित गर्छ। अब यो सिर्फ multivarka छैन, तर पनि एक मिनी कुकर। हामी उपकरणको प्राविधिक विशेषताहरु कुरा भने, तिनीहरूले निम्नानुसार छन्:
multivarka 240 वी को अनुज्ञेय भोल्टेज गर्न डब्ल्यू 860 को क्षमता छ;
1 उपकरण सुसज्जित बिजुली आघात को सुरक्षा वर्ग संग;
एक nonstick माटोको कोटिंग संग इस्पात 5-लीटर कप; यो 3D-ताप को समारोह प्रदान गर्दछ;
एक हटाउन सकिने भित्री आवरण र बाफ वाल्व शुद्धीकरण प्रक्रिया सुविधा;
23 स्वचालित पकाउने कार्यक्रम;
भाँडा अधिकतम तापक्रम 24 घण्टा कायम गर्न सकिन्छ;
एलसीडी डिस्प्ले र झिल्ली बटन नियन्त्रित छ;
को ताप तत्व उठाने;
धातु र प्लास्टिक को शरीर।
मूल प्याकेजिङ्ग मा, Multivarki रेडमन्ड RMC-FM230 बाहेक, तपाईं पनि पाउनुहुनेछ:
5 लीटर कचौरा; भाँडा उमालेको लागि विशेष कन्टेनर;
गैर-स्टिक कोटिंग संग सानो पैन;
दानेदार र तरल सामाग्री को लागि बेकर;
करछुल, चम्चा र संडसी र विशेष होल्डर;
जो यस मोडेल लागि सबै भन्दा राम्रो व्यञ्जनहरु को 120 संकलित पुस्तिका।
को उपस्थिति र डिजाइन सुविधाहरू
निर्माता को उपकरणहरूको लागि रूपमा Multivarki रेडमन्ड RMC-FM230 मानक डिजाइन। को लम्बी शरीर धातु को गरे, र शीर्ष प्यानल र ढक्कन को तल्लो भागमा - एक चमकदार काले प्लास्टिक को। परिवहन सजिलो को लागि कलम प्रदान।
पछाडि पक्ष आवरण एक हटाउन सकिने प्रालंब जो कर्तव्य संघनक प्रदान गर्दछ छ। को ताप तत्व सजिलै विशेष forceps वा स्वयं प्रयोग उठाएर गर्न सकिन्छ। यो पनि टिप्पण लायक छ, अघिल्लो मोडेल विपरीत, शक्ति बटन अलग, जो सञ्चालन थप सुविधाजनक Multivarki बनाउँछ लिएको।
Multivarka रेडमन्ड RMC-FM230 सेतो backlight संग एक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले नियन्त्रण, र 8, झिल्ली कुञ्जीहरू। छैन केवल क्लिक सँगसँगै, तर पनि एक खास बीप थिचेर। स्क्रिनमा एक डिजिटल घडी यो उपकरण प्रदान चयन मोड र कार्यहरु प्रदर्शन छ।
"-" फरक अन्य यस्तै उपकरणहरू भन्दा प्रबन्ध छन् यो "+" प्रमुख र टिप्पण लायक छ। फलस्वरूप, उपकरण को शुरुवात सञ्चालन मा भ्रम हुन सक्छ। तर, यो shortcoming छैन अत्यावश्यक, किनभने प्रयोगकर्ता चाँडै यो सुविधा गर्न accustomed बन्न छलफल गर्न सकिन्छ। सोही यी बटन थिचेर गर्दा सक्रिय उपकरण लक प्रकार्य।
नवाचारै को एक पकाउने कार्यक्रम को विवरण विचार गर्न सकिन्छ। यो पकाउने समय स्थापना अघि, तपाईं गर्मी-उपचार हुनेछ उत्पादन को प्रकार निर्दिष्ट गर्नुपर्छ भनेर बुझ्ने गरिन्छ। व्यक्तिगत तापमान नियन्त्रण स्वाद र पोषक सुरक्षित गर्नेछ।
एक राम्रो नयाँ सुविधा गैर-अस्थिर स्मृति छलफल गर्न सकिन्छ। त्यसैले, तपाईं अचानक प्रकाश बन्द भने, पनि एक घण्टा को एक चौथाई लागि predetermined तालिका मा काम गर्न जारी multivarka।
को experimenters ठूलो चासो जो तपाईं भोजन को तयारी समयमा सीधा सेटिङ परिवर्तन गर्न अनुमति दिन्छ "मास्टर सेफ" को समारोह, छ। यो पनि एक टेम्पलेट कार्यक्रम रूपमा भविष्यमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यका लागि प्रदर्शन manipulations भण्डारण को संभावना टिप्पण लायक छ। त्यसैले तपाईं साँच्चै सिद्ध भोजन सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ।
कष्ट-मुक्त र उच्च गुणस्तरीय कामको लागि आवश्यक विशेष हेरविचार एकाइ रेडमन्ड RMC-FM230। Multivarka-multikuhnya एक चमकदार काले रंग केसिङ स्पष्टै सबै प्रदूषण देखिने छन् जो छ। यसलाई त्यसैले हरेक सत्र पछि एकाइ भिजेको र सुक्खा पोंछे हटाउन भनेर सिफारिस गरिएको छ।
कचौरा हात वा रेडियोबिना मा धोए गर्न सकिन्छ। गैर-स्टिक कोटिंग बिगार्न छैन क्रममा, यो मात्र एक नरम स्पन्जले र बख्शते डिटर्जेंट प्रयोग गर्न आवश्यक छ। बलियो प्रदूषण भने, यो ट्यांक न्यानो पानी मा खन्याउन र भिजेको गर्न छोड्न आवश्यक छ।
विशेष ध्यान पनि हटाउन सकिने आवरण को भित्र सफाई भुक्तान गर्नुपर्छ। पहिलो तपाईं प्लास्टिक ट्याबहरू प्रेस, र त्यसपछि एल्यूमीनियम डिस्क को मुख्य सतह देखि विच्छेद (यो यन्त्रमा क्षति रोक्न एक प्रमुख प्रयास गर्न आवश्यक छैन) आवश्यक छ। भित्री ढक्कन स्पन्जले र विशेष उपकरण र प्लास्टिक सतह संग पानी चलिरहेको अन्तर्गत धोए गर्नुपर्छ - एक नम कपडा संग हटाउन र सुक्खा हटाउन। पनि हटाउन सकिने बाफ वाल्व नियमित लुगा धुने आवश्यक छ।
यो होसियार संचालन र अनुपालन गर्ने काम कोठामा दूषण को निर्देशन सबै आवश्यकताहरु संग वस्तुतः असम्भव छ भनेर टिप्पण लायक छ। तर, यदि यो हुन्छ, तुरुन्तै एकाइ विद्युत mains विच्छेद। तपाईं सतह नरम र अलिकति नम हुनुपर्छ हटाउन हुनेछ जुन स्पन्जले। डिटर्जेंट प्रयोग स्वागत छैन।
Multivarka रेडमन्ड को RMC-FM230: समीक्षा, मर्यादा
Multivarka - यो क्षण मा सबै भन्दा लोकप्रिय भान्सा उपकरण को एक हो। पहिले नै धेरै रेडमन्ड RMC-FM230 रूपमा यो नयाँ उत्पादन प्रयास थियो। यो उपकरण को समीक्षा निम्न सकारात्मक टिप्पणी समावेश छन्:
धेरै विस्तृत निर्देशनहरू, एक नियन्त्रण एकाइ पनि बच्चा सम्हाल्न सक्छन् जो धन्यवाद;
(कारण ताप तत्व बढ्दो गर्न) एक बर्नर रूपमा यन्त्र प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता;
समावेश गैर-स्टिक कोटिंग संग एउटा सानो पैन छ;
भनेर चाँडै लोकप्रिय व्यञ्जन पकाउन गर्न अनुमति स्वचालित मोड को एक विशाल संख्या;
को "मास्टर सेफ" तपाईं व्यक्तिगत पकाउने कार्यक्रम प्रक्रिया मा सेटिङ परिवर्तन गर्न आवश्यकता दिनले रेकर्ड गर्न अनुमति दिन्छ;
स्टाइलिश डिजाइन आफ्नो भान्सा को multivarku सजावट बनाउन;
भनी अन्तर्गत झिल्ली बटन माटो भरिएको छैन भन्ने तथ्यलाई कारण;
एक हटाउन सकिने भित्री आवरण दूषण देखि सफाई प्रक्रिया एकाइ सुविधा।
Multivarka-multikuhnya रेडमन्ड RMC-FM230: समीक्षा, बेफाइदा
यसलाई लायक छ टिप्पण कि पर्याप्त यस Multivarki मा कमी। ग्राहक समीक्षा निम्न पाउन सकिन्छ:
गरिब हेर्ने कोण र धेरै राम्रो प्रकाश संग कम गुणस्तर प्रदर्शन;
धूपदान आकार तपाईं मात्र सानो अंश तयार गर्न अनुमति दिन्छ;
धेरै यन्त्रहरू मा काम गरिरहेको छैन frying मोड (त्रुटि multivarka र बन्द);
नेटवर्क केबल सकेट मा शिथिल सज्जित छ, र उपकरणको slightest आन्दोलन घोप्टो;
दूध भान्सा किनभने मात्र सबै multivarku धुन आवश्यक छ के को, निरन्तर चल्छ, तर पनि;
कडाई पुस्तिका देखि नुस्खा पालना र पाक को उपयुक्त मोड प्रयोग पनि पाकेका छ;
Multivarki पक्ष एक ठूलो कागज लेबल, पोर्ट सञ्चालन प्रक्रिया छ जो छ, र यसलाई हटाउन व्यावहारिक असम्भव छ;
को ताप उठाउनु तत्व समस्याग्रस्त छ;
समय संग कचौरा परिवर्तन रंग (निर्माता उत्पादनहरु जल र विशिष्ट स्वाद प्राप्त गर्न सुरु यो विवाह विचार गर्दैन, तथ्यलाई बावजुद);
समावेश आवरण पैन;
पकाउने कार्यक्रम प्रयोग मासु नम रहिरहन्छ (यसलाई आफ्नो reprocessing पर्दाफास गर्न आवश्यक छ)।
यो पनि एक प्लेट रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ किनभने Multivarku रेडमन्ड RMC-FM230, भान्सा उपकरण को क्षेत्र मा एक नवीनता रूपमा छलफल गर्न सकिन्छ। यो माली लागि रूपमा साथै छात्रावास मा, बस्ने विद्यार्थीहरूको लागि एउटा उत्कृष्ट विकल्प छ। बढ्दो ताप तत्व तपाईं केतली, जोश, भुट्नु जोश वा उत्पादनहरु बुझाने गर्न सक्षम बनाउँछ।
तर विचार को enormity बावजुद, यसको कार्यान्वयन लङ्गडा छ। सदस्यहरूले उठाएको कि ताप तत्व कमजोर छ रूपमा (तर यो सानो अंश लागि पर्याप्त हुनेछ) उल्लेख गरे। साथै, धेरै मोड गलत, किनभने भाँडा पाकेका छन् के को, प्रोग्राम वा, त्यसको विपरीत जल।
हावा बिना मोबाइल वातानुकूलन: मालिकको, विक्रेता र doubters समीक्षा
सडक प्रकाश को लागि एक हलोजन floodlight कसरी चयन गर्ने?
के राम्रो वाशिंग मिसिन: चयन मापदण्ड
डिजिटल ट्युनर - आधुनिक टीवी को एक अनिवार्य विशेषता
एक घर थिएटर जडान: चार्ट निर्देशन
इन्टरनेटमा कमाउन सुरु गर्न चाहनुहुन्छ गर्नेहरूका लागि राम्रो सुरुवात - क्लिक मा आय
र कसरी जब पट एउटा बच्चा सिकाउन
पिकका लागि "Meps": समीक्षाहरू
कसले Kelli Kepvell प्ले? अभिनेत्री रबिन Rayt: तस्बिर, जीवनी, Filmography
पत्थर स्नान: कसरी सबैभन्दा उपयुक्त चयन गर्न?
टर्की, होटल सर्प होटल बेले4*। समीक्षा र वर्णन
"Gidroperit": प्रयोग कपाल हल्का लागि निर्देशन, फोटो
के कार शरीर पलिश बनाउँछ?
Alisa Kleybanova - टेनिस खेलाडी, क्यान्सर हरायो
"काग गरेको फारम" (मनोरञ्जन केन्द्र): फोटो र समीक्षा
हेलेना क्रिस्टेंसेन एक प्रसिद्ध फैशन मोडेल, अभिनेत्री, फोटोग्राफर हो। हेलेना क्रिस्टसेनको जीवनी